Fampandrosoana · Septambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fampandrosoana · Septambra, 2018
Tantara mikasika ny Fampandrosoana tamin'ny Septambra, 2018
Azia Afovoany sy Kaokazy 18 Septambra 2018
Libanona 12 Septambra 2018
Azia Atsimo 12 Septambra 2018
Nauta Hogar: Fitaovana Iray Ho An'ireo Kiobàna Mpandraharaha
Amerika Latina 11 Septambra 2018
Ny Programa amin'ny Aterineto Nauta Hogar dia dingana iray mandeha mankany aloha, saingy tsy mbola vahaolana io ho an'ireo orinasa Kiobanà miasa amin'ny sehatry ny teknolojia.
Bangladesh: Firenena latsaka an-katerena, loharanom-baovao ny bilaogera
Azia Atsimo 09 Septambra 2018
Nahita fiovana lehibe i Bangladesy vao haingana. Ny alakamisy alina, nanambara firenena latsaka an-katerena ny filoha Iajuddin Ahmed ary nametra-pialàna amin'ny maha-lehiben'ny governemanta vonjimaika azy, izay fitakiana voalohany nataon'ny firaisamben'ny mpanohitra. Nahemony ihany koa ny fifidianana amin'ny 22 janoary, izay voalaza fa efa vita ny dingana amin'izany.
Niantso ho amin'ny fanovàna ny Irakiana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 09 Septambra 2018
Nitranga nanerana ny tontolo Arabo ny fitroarana sy ny fihetsiketsehana tamin'ny taona 2011. Nikarakara fihetsiketsehana ny olona tany Libya, Alzeria , Maraoka , Bahrain ary firenena Arabo hafa. Tsy nisy hafa tamin'izany ny tao Iraka izay nahitana vahoaka nitaky fanovàna.
Azia Atsimo-Atsinanana : Ny fiakaran’ny vidim-bary
Broney 07 Septambra 2018
Nisondrotra maneran-tany ny vidim-bary sy ny entana ilaina andavanandro. Miantraika amin’ny olona an-tapitrisany na koa angamba an’arivony tapitrisa mihitsy aza ny fiakaran’ny vidin-tsakafo. Mampisalasala indray ny politika ara-tsakafo. Nametraka fepetra haingana ny governemanta mba hampitoniana ny ahiahin’ireo mpifidy ao aminy.
Egypta: Mampiasa ny Twitter ho an'ny fahasalamana tsara kokoa
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 06 Septambra 2018
Azo ampiasaina ve ny Twitter hamonjena ain'olona na hanatsarana ny fahasalamany? I Tarek Amr dia manao topi-maso ny kaonty Twitter izay tantanan'ny mpivady iray ao Egypta, mikendry ny hampitombo ny fanentanana ara-pahasalamana eo amin'ny fiarahamonina, izay matetika mahakasika ny lohahevitry ny zava-pady, toy ny fanabeazana ara-pananahana.